Tag: Technology | Martech Zone
Chipiri, August 25, 2020 Chipiri, August 25, 2020 Adrian Chang
Pakave neshanduko yakawandisa munzira yatinoshanda nayo mumwedzi ichangopfuura zvekuti vamwe vedu vangangotadza kuziva mhando dzezvinhu zvitsva izvo zvaive zvichitowana hunyanzvi denda repasi rose risati rarova. Sevashambadziri, tekinoroji yebasa inoramba ichitiunza padhuze sechikwata kuti tikwanise kushandira vatengi vedu munguva dzino dzinonetsa, kunyangwe isu tichifamba mumatambudziko muhupenyu hwedu. Izvo zvakakosha kuve akatendeka nevatengi, se
Nzira Nomwe Tekinoroji Inogona Kuparadza Brand Yako
NeChishanu, Nyamavhuvhu 23, 2019 China, April 1, 2021 Douglas Karr
Vhiki rino, ini ndaive pane saiti ndichiita yedhijitari yekushambadzira yemusangano wepasi rose brand. Iyi semusangano yaive uye yakamisikidzwa neni uye yakabatana muchikamu neButler University uye mudzidzisi anoshamisa ari wenguva yakazara mukati mesangano. Patakasvika pachikamu cheMartech Stack chepuratifomu kudzidzisa vashandi nezvezvigadzirwa zvetekinoroji mukati mesangano, ndakarohwa nekubatanidzwa kwemapuratifomu. Izvo zvaisaratidzika senge zvakajairika yako Martech Stack